Maxaan ka ognahay dilka Samafale lagu dilay Gaalkacyo? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaan ka ognahay dilka Samafale lagu dilay Gaalkacyo?
Nin Samafale ah oo aad caan uga ahaa magaalada Gaalkacyo ayaa toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Gaalkacyo, iyadoo dilka marxuumkaasina lagu eedeeyay ciidamada dowladda, Keydmedia Online ayaa aruurinaysay macluumaadka.
GAALKACYO, Soomaaliya - AUN Sheekh Cali Axmed Faarax (Sheekh Cali Dheere) oo ahaa Maamulihii guud ee Jamciyadda imaamu Nawawi qeybta Gobolka Mudug ayaa lagu dilay deegaanka Taarroge ee galbeedka magaalada Gaalkacyo, todobaadkii lasoo dhaafay.
Dilka Sheekha ayaa muran badan ka dhashay, waxaana la hadalhayay baraha bulshada. Sheekh Cali ayaa waxaa laga afduubtay Xarunta Agoonta degaanka Xaar Xaar ee ku taal duleedka koonfureeed ee magaalada Gaalkacyo.
Cali Dheere ayaa lafdhabar u ahaa Waxbarashada iyo xanaanada Agoonta Gobolka Mudug, wuxuuna muddo 25 sano ka badan uu ka shaqeynayay arimaha Samafalka iyo daryeelka Agoomaha.
Afartii bisha Ramadaan ayaa lagu xiray xerada Ciidamada la dagaalanka Argigixisada ee Danab ee Gaalkacyo, halkaas oo uu todobaadyo ku xirnaa. Geeridiisa ayaa walaac ku abuurtay bulshada gobolka Mudug waxaana kiiska dilkiisa gacanta ku haya oo baaritaan kuwada laanta Dambi Baarista C.I.D ee Gaalkacyo.
AUN Sheekh Cali Dheere ayaa ahaa shakhsi Gobolka Mudug aad looga yaqaaney wuxuuna caan ku ahaa garab istaaga danyarta ah ee ku dhaqan gobolka Mudug.
Bishii April ee sanadkan ayaa la xiray kadib eedeyn loo jeediyay in uu gacan saar la lahaa kooxda Argagaxisada ah ee Al-Shabaab, sadex goob oo laamaha Amniga Galmudug iyo kuwa Faderaalka Soomaaliya gacanta ku hayaan ee Galkacyo ayaa midba mar looga yeeray, inkastoo aan kiiskiisa loo gudbin Maxkamad haddan ma jirin caddeyn rasmi ah, ugu danbeyntiina waxaa la sheegay in lacag madax furasho ah ayey ka qaateen kooxdii dambiga u haysatay waxaana cadadda lacagtaasi lagu sheegay $1,000.00 (Kun dolar).
Ciidamadda Dowladda ayaa sido kale waxa ay kala hareen Telfoonkiisa, sida ay Keydmedia Online ogaatay, intas kadibna wa lasii dayay Sheekha.
Ciidamo ka tirsan kuwa NISA ayaa lagu eedeynayaa dilka Sheekha, waxaana loo dilay si arxan daro ah asigoo meydkiisa soo qaaday ciidanka militariga isku dhafka ah ee magaalada Gaalkacyo iyadoo dib loogu soo celiyay magaalada Gaalkacyo.
Mar hadii Cadaaladii tagtoo la tixgalin waayo Inay Nabadu Taam noqota wa tu aan la helin (Abwaan Xaaji Aadan Ahmed Afqalooc).
Warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa laga sii daayay baafinta mid kamida Askartii Ciidanka Booliska ee magaalada Gaalkacyo, waxaana baafinta lagu sheegay in Cabdi Xakiim Cabdisalan Aadan, uu yahay ruux la doonayo, waxaana laga codsaday umaddda Soomaaliyeed haddii ay arkaan in ay kusoo hagaajiyaan laamaha amniga.
Keydmedia Online ayaa laamaha Amniga ka ogaatay in Askarigaan loo haysto dilka Sheekha.
Cabdiraxmaan Sheekh Cali Dheere oo ahaa wiil uu dhalay marxuumka ayaa yiri “Aabahay wuxuu Gaalkacyo u yimaadey in uu kafaalo qaado aqoonta. laakiin waxay ugu abaal-gudeen in ay ilmihiisa agoon ka dhigaan”. Oday si kulul uga hadley dilka Sheekh Cali Axmed Faarax ayaa yiri “Wixii Qoorqoor soo dhisay ayaa na dilay oo Sheekh Cali dilay”
“Sheekh Cali Dheere aano qabiil looma dilin ee waxaa dilay dawladda Galmudug iyo Dawladda Federaalka”. Sidaas waxaa yiri Mahad Maxamed Shaare oo ka mid ah da’ yarta ku nool magaalada Gaalkacyo.
Guddi ayaa Isniinta maanta loo xil saaray in ay soo baaraan dilka Sheekha.
Falka lagu dilay AUN Marxuum Cali dheere ayaa aad loo cambaareeyay, bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa dareenkooda ku muujiyay isku soobax ay ku doonayaan in Marxuumku uu caddaalad helo.